Eustatius - Saba - Sint Maarten chikepe chitsva chepakati pezvitsuwa chakatangwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Eustatius Kuputsa Nhau » Eustatius - Saba - Sint Maarten chikepe chitsva chepakati pezvitsuwa chakatangwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • nhau • vanhu • Vadivelu Comedy Dailymotion vi News • Eustatius Kuputsa Nhau • St. Maarten Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iyo M / V Makana yeBlues neBlues Ltd. kubva kuAnguilla.
Makana Ferry inotanga nzendo dzepakati pezvitsuwa pakati peStatia, Saba neSint Maarten munaNovember 1, 2021.
Blues neBlues Ltd yeAnguilla yakahwina iyo tender yeiyo yepakati-chitsuwa yemahara yekubatana neM / V Makana.
Makana inosvika makumi maviri nemaviri masendimita Saber catamaran ngarava inomhanya, inokwanisa kutakura vanhu zana nemakumi mashanu pamatanho maviri.
Kugadzirira kwechikwata chepakati pezvitsuwa chiri kufambira mberi zvizere kuti vakwanise kusangana nezuva rekutanga.
Blues uye Blues Ltd. yeAnguilla yakarongerwa kutanga nerwendo rwepakati pezvitsuwa pakati peStatia, Saba neSint Maarten munaNovember 1, 2021. Kugadzirira kwechikwata che-inter-chitsuwa kuri kufambira mberi kuzere kusangana nemusi uyu. Ruzivo pamari dzekubhadhara uye iyo chaiyo purogiramu ruzivo rwuchazotevera kutevera.
Blues neBlues Ltd yeAnguilla yakahwina iyo tender yeiyo yepakati-chitsuwa yemahara yekubatana neM / V Makana. Makana inosvika makumi maviri nemaviri masendimita Saber catamaran ngarava inomhanya, inokwanisa kutakura vanhu zana nemakumi mashanu pamatanho maviri. Kune dhizaini yepazasi, yepamusoro (yakavhurika) dhiza rezuva uye yepamusoro bhizimusi kirasi nzvimbo. Dhizaini yepazasi nenzvimbo yepamusoro zvese zvine mweya wakazara uye dzakashongedzwa nezvimbuzi zviviri nebhawa.
Iyo Makana ichapa yakakwana mikwende uye nhumbi mashandiro. Iyo catamaran ichafamba zvakasununguka pane yekumhanyisa kumhanya kwemakumi maviri nematatu ine yakanyanya kumhanya ye23knots. Nzendo idzi dzinenge dzinenge maminetsi makumi mashanu nemashanu kubva kuSaba kusvika Statia, Maminetsi 75 kubva kuSaba kusvika St. Maarten uye 85 maminetsi kubva Statia to St. Maarten. Nekuda kwezvirambidzo zve COVID-19 muSt. Kitts, nzira inoenda kuchitsuwa ichi haigone kurongwa kusvika zvaziviswa.
Makana izwi reHawaiian rekuti "Chipo". Blues & Blues Ltd. yakagamuchira ngarava mumakungwa ayo munguva pfupi yapfuura. Vatakuri vanogona kutarisira hushamwari uye hwakavimbika sevhisi yakakwana neboardboard yeWiFi uye online vatengi vatengi. Iyo Makana ichave yakamira muStatia kana Saba. Vagari vanokurudzirwa kunyorera nzvimbo dzisina vanhu senhengo dzevashandi.
Samuel Connor, muridzi weBlues neBlues Ltd., akati: “Tiri bhizinesi remhuri. Isu tinotenda zvakasimba kuti tinogona kubatsira mukusimudzira magariro pamwe nehupfumi hwezviwi kuburikidza nekubatana kwepakati pegungwa kusanganisira St. Barth, Anguilla neNevis ”.
Chekutanga-mu-Munhu Chidzidzo cheNew COVID-19 Vaccine...
Harry Styles "Rudo Pakushanya" Finale Akasangana ...